Wallagga bahaatti ABO Shannen kaampii waraanaa banee dargaggoota leenjisaa jira jedhame – ዜና ከምንጩ
Wallagga bahaatti ABO Shannen kaampii waraanaa banee dargaggoota leenjisaa jira jedhame
Naannoo Oromiyaa Godina Wallagga bahaa Aanaa Kiramuutti gareen hidhataa ABO Shanee kaampii waraanaa hunddessee dargaggoota leenjisaa jiraachuu isaa jiraattonni naannichaa Addis Maaladaatti himaniiru.
Gareen kun qa’ee waraanaa hundessee sochoo’aa Kan jiru Godina Wallagga bahaa Aanaa Giddaa ayyaanaa bakka qoqoffee jedhamuutti ta’u isaa jiraattonni magaalattii maqaan isaanii akka hin eeramnne gaafatanhimaniiru. leenjitoonni kun baajaajii sagaliifi konkolaattota siinoo shaniin feamanii yammu deeman argu isaanii jiraattonni kun Addis Maaladaatti himaniiru.
Mannetii barmootaaf iddowwanheddubakkaQoqqoffee jedhamu kana leenjiif itti fayyadamaa jiraachuu jiraattonni naannichaa kaasanii bakka leenjii waraanaattis dargaggonni heddu lenji’an mullachuu isaanii eeraniiru.
Jiraattonni naannichaa Addis Maaladaatti akkka ibsanitti Onkololeessa 25/2014tti namnni afaan amaarriffa dubbatu tokko ajjeefamee reeffii isaa itu lafa irra harkifamu arguu isaanii dubbataniiru. haleellichi keessumaa dhalattota Amaaraa Irrati kan xiyyefatu ta’u isaatiin gandaa gandallee deemuu akka hin dandeenye jiraattonni kan ibsan yammu ta’u ittii dabalaniis namootiin garee kana deeggaran sangaa qalanii yammu nyaachisan argu dubbataniiru.
Hogganttonni Aanichaas ta’e gandaa yaaddo nuttis miidhaan nurratti raawwatama jedhuun Hidhattotakanawajjinwaliigalteedhaansocho’ajiraachuisaanii jiraattonni ibsaniiru. Hidhattonni mootummaa hidhattonni ABO Shanee naannichatti baliinaan akka socho’aan odeffannoo yoo qabaataniis daandiin Aanaadhaa gara gandaa geessu cufamuu isaatiin humnnonni tasgabbii seenuu hin dandeenye.
Jiraattonni kun itti dabalaniis hidhatootaABOShanee kanaan daandiin naannoleelAmaaraatii Naqamtee, Naqamteeti ammo Finfinnee geessuu cufamuu isaatiin tajajilawwan wallaansaafii kannen biroo argachuu dadhabuu isaanii dubbataniiru. Dabalataaniis daandiin Naqamteetii amma Buree geessuu ergii cufamee baatii torbaa ol ijaa ta’e balaa du’a isaanitti aggaamee jalaa baqachu akka hin dandeenye jiraattonni dubbataniiru.
Sababii kanaas haadholiin AanaaKiiramuu ganddawwan garaa garaa kessatti ulfa’ani jiran sababii wall’ansa dhaban lubbun isaanii darbaa jiraachu ibsaniiru. Amma ammaatti Aanaa Kiramuutti haadholiin sagal Waka’ansa dhabuudhaan dhignii isaan dhangala’e lubbuun isaanii darbu maatiiwwan isaanii Addis Maaladaatti himaniiru.
Gareen hidhataa kun haleellaa geessisaa jiru baqachuudhaan Haroo magaalaa Addis Alamitti qubatanii kan jiran buqqaatonni kuma 40 ol rakko irra jiraachuu isaanii kan eeran buqqaatonni kun amma ammaatti mootummaa irraa gargaarsa argachaa akka hin jirree fi rakkofii beela hamaaf saaxiluu isaanii dubbatu.
Addis Maaladaan gaafii jiraatootaa qabatte bulchaa Godina wallagga bahaa Aanaa KiramuBalaay Dassaalanyitti yaroo daddabalamaa bilbiltuus bilbila isaanii cufanii deebii argachuu hin dandeenyee.
Itti gaafatamaa damee nageenyaa Aanaa Kiramuu Hunddarraa Bayyana waayee komii jiraattota kanaa gaafachuuf bilbiltuus bilbilli isaanii cufaa ta’u isaatiin argachuu hin dandeenyee.
Godiinoota wallagga bahaafii lixaatti ballinaan sochoo’aakan jiru gareen hidhataa ABO Shanee yeroo dhiyoodha asitti iddowwan to’atuutti babaliifachaa jiraachuu isaa jiraattonni eeraniiru.
Naanno Oromiyaatti mootummaan yeroo daddabalamaa hidhattota ABO Shanee keessumaa yeroo dhiyoo asitti naannichaa qulqulleesuudhaaf yaalii taasiisaa jiraachuu isaa ibsuun isaa kan yaadatamuudha.
Total views : 6983018